Sida loo Copy iPhone Xiriirada in Computer la / aan Lugood t
Hi, halkan waa waxa aan xaaladda waa: I leedahay macruufka iPhone jir socda 9. Waxaan leeyahay dhammaan xiriirada aan on my iPhone oo aad rabtid inaad iyaga u gudbiyaan si aan PC si aan markaa iyaga dajiyaan karaa in qalabka kale ee aan. Waan ogahay Lugood dib kartaa kombiyuutarka, laakiinse anigu uma aan isticmaali kartaa file gurmad u ah qaabka. Ma jiraa wax aan si computer wareejin karaan xiriirada iPhone iyo u isticmaali ku haboon? Rajaynaynaa in aan si fiican u sharxay aan dhibaato. Thanks ka hor.
Sida loo nuqul ka xiriirada iPhone si aad u computer ama Mac
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada iPhone si aad u computer qaab caadi ah, waxaad u timid inaad meel sax ah. Si aad u samaysid iyada, waxaad u baahan tahay xiriirada iPhone ah wareejinta qalab. Halkan waxa weeye laba qalab aad loogu: Mid ka mid ah aalad waa Wondershare TunesGo (Windows). Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso xiriirada, music, videos, sawiro iyo SMS ka iPhone in PC. Kale waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta Mac iPhone) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) (Windows). Ka sokow wareejinta xiriirada on iPhone in PC, qalab inta badan waxay kaa caawin xogta soo kabashada aad iPhone.
Xalka 1: Nuqul iPhone xiriirada si PC la TunesGo
Xalka 2: Saxiixa xiriirada iPhone in PC la Dr.Fone ee macruufka
Iyadoo TunesGo Wondershare, aad awoodo in aad nuqulka xiriir iPhone iyo xiriirada ka Exchange, iCloud, Yahoo !, Gmail, iyo xisaab oo dheeraad ah si computer si fudud. Cinwaanka waxaa lagu badbaadiyey sida file vCard hal ama dhowr ah files vCard. Sidaas darteed, waa arrin connvenient, waayo, waxaad si ay u gudbiyaan xiriirada si aad Gmail, Muuqaalka iyo in ka badan. Ka sokow xiriirada, waxaad sidoo kale ku wareejin karaa music, playlists, sawiro, SMS, podcast, audiobook oo dheeraad ah si aad PC.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), 5c iPhone, iPhone 5S, iPhone 4 iyo iyo ka badan orod macruufka 8, macruufka 9, macruufka 7, macruufka 6 ama macruufka 5 .
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB ah
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan TunesGo Wondershare on your computer. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka. Ka dib markii la ogaado, aad iPhone la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose, sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Tallaabada 2. xiriirada iPhone Transfer in computer
In galeeysid bidix, guji "Xiriirada" si ay u muujiyaan xiriir ah oo ku saabsan kaarka iPhone xusuusta iyo xisaab, sida iCloud, Exchange iyo Yahoo !. In suuqa kala xiriir ah, doortaan xiriirada in aad jeceshahay si ay u gudbiyaan si kombiyuutarka. Guji "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta soo xulay Xiriirada" ama "dhoofinta Dhammaan Xiriirada"> "in a vCard File Single" ama "Multiple vCard Files". Markaas suuqa kala file browser soo booda. Browse your computer si aad u hesho meel ay ku badbaadin xiriirrada dhoofiyo.
Ka sokow files vCard, waxaad kartaa in Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 wareejiyo xiriirada , Windows Live Mail iyo Windows Cinwaanka Book.
Fiiro gaar ah: Mid ka mid ah wax waa in aad xusuusan yahay in haddii aad jeceshahay si ay u gudbiyaan xiriirada ka iCloud, Exchange, Yahoo !, iwm si aad u computer ah ee gurmad, waa in aad la saxiixato xisaab adiga ku iPhone hore. On aad iPhone, guji "Settings"> "Mail, Xiriirada, Calendar"> "dar xisaabta ...".
Video wuxuu kuu sheegayaa sida loo nuqul ka iPhone xiriirada si PC
Isku day TunesGo si ay u gudbiyaan xiriirada iPhone nuqul PC.
Xalka 2: Saxiixa xiriirada iPhone in PC la Dr.Fone (Mac) iyo Dr. Fone
Labada nooc oo qalab aad u dhaqaaqo xiriirada aad ka iPhone in computer laba siyaabood, laakiin waxaa jira farqi. Mid ka mid ah jidkiisu waa in aad si toos ah u wareejin karaan xiriirada iPhone in your computer iyadoo lagu eegayo aad iPhone. Waayo, intay jidka oo kale, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan Lugood sida qalab kaabayaal ah. Nidaameed iyo gurmad aad iPhone la Lugood, ka dibna u isticmaali Wondershare Dr.Fone Macdan gurmad iyo badbaadin eegista aad xiriirka la leedahay. Waxaa kale oo aad u fudud. Just Raac tallaabooyinka hoose oo ay leeyihiin isku day ah.
Download version maxkamad free hoose si aad nuqulka xiriir iPhone in computer. Dooro version saxda ah iyo waxa ay isku dayaan in si bilaash ah!
Qaybta 1aad: Si toos ah u gudbiyaan xiriirada iPhone in PC (Waayo iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / users 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS)
Qeybta 2: Nuqul iPhone xiriirada si Mac / PC ay soo saarida Lugood files gurmad (waayo, kulli dadka isticmaala iPhone)
Qaybta 1aad: Si toos ah u gudbiyaan iPhone xiriirada si PC
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer
Marka hore, ordo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (ee soo socota aynu qaadan ah iPhone 4 version tusaale ahaan) iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markaas waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota.
Tallaabada 2. gala hab iskaanka qalabka iyo bilaabaan in ay baarista iPhone
Marka aad suuqa kala kor ku xusan, raac tilmaanta u soo bandhigaysaa iyo bilaabo galay hab iskaanka ah. Ama waxaad samayn kartaa sida ay tallaabooyinka hoos ku qoran:
Haddii aad ku guul darreystay, waxba ma ahan. Just isku day mar kale. Haddii aad soo gashay, waxaad ka heli doontaa in Dr.Fone si toos ah bilaabmaa aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaalayso iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s / 5c / 5 ama iPhone 4s, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad sidan oo kale. Just riix "Start" button on suuqa kala aasaasiga ah iyo barnaamij ku samayn doonaa shaqada idiinka tegey.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo wareejiyo xiriirada iPhone in aad PC
Scan ka dib, xogta iPhone oo dhan waxaa laga heli karaa oo ku qoran qaybaha cad. Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato waa in xogta halkan soo bandhigay ma aha oo kaliya mid ku saabsan iPhone, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa dhawaan la tirtiro ka iPhone. Si aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa button slide ugu hooseysa: Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiro.
Hadda, aad u fiirso karaa "Xiriirada", ama waxyaabaha aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer. File ayaa ku badbaadi doontaa seddex noocyo: CSV, VCF iyo HTML.
Qeybta 2: Nuqul iPhone xiriirada si Mac / PC
Habka labaad waa in aad nuqulka xiriir iPhone si aad u Mac ama PC ay soo saarida gurmad Lugood, waana la heli karo oo dhan iPhone (macruufka 9 taageeray) isticmaala.
Tallaabada 1. nidaameed iPhone la Lugood
Connect aad iPhone in kombiyuutarka, iyo hagaagsan la Lugood in ay curiyaan file ah oo gurmad ah.
Tallaabada 2. Scan Macdan gurmad Lugood xiriirada iPhone aad
Halkan, qaado Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) sida tusaale ahaan. Waxaa Orod aad Mac, oo waxaad heli doontaa suuqa kala ugu weyn. Gurmad Lugood ee aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa. Waxaa Dooro oo guji "Start Scan" si ay u soo saaro.
Haddii aad isticmaalayso Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac), ku biiray ah "kabsado Lugood ee kaabta File" doorasho dusheeda. Waxaad heli doontaa daaqad la mid ah. Soo qaado tallaabooyinka soo socda la mid ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo wareejiyo xiriirada iPhone si Mac ama PC
Marka soo saarida ku dhameystiray, dhammaan waxa ku jira waxaa ka mid ahaa in gurmad Lugood ee file waxaa laga heli doonaa oo la joogo si faahfaahsan. Waxaad iyaga ku eegaan karo oo dhan mid mid. Mark "Xiriirada" oo guji "Ladnaansho", aad haatan badbaadin karo xiriirada iPhone si aad u computer ah.
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone SMS si PC / Mac
Daawo Fast iyo Cadho Ka Movie Taxanaha Online iyo Free
2 Siyaabo Sahlan ee kaabta iPhone Data hor Casriyaynta in macruufka 7
> Resource > iPhone > Sida loo Copy iPhone Xiriirada in Computer la / aan Lugood